>IC family and Daw Suu
ဂျူနီယာဝင်း – အာဟာရဆိုတာ ဘာလဲ (nutrition) (မိုးမခ) ဇွန် ၂၈၊ ၂၀၁၈ အာဟာရဆိုသည်မှာ အမှန်တော့ ကျွန်ုပ်တို့ နေ့စဉ် စည်းကမ်းတကျ စားသောက်နေသမျှ ဖြစ်ပါသည်။ ပုံတွင် အသား အသီးအရွက် စသည်ဖြင့် နေ့စဉ် စည်းကမ်းတကျ စားသောက်သင့်သော အစားများ။ ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်ခန္ဓာထဲက အစိတ်အပုိုင်းများ သူ့နေရာနဲ့သူ အစာအာဟာရ ရရှိအောင် စားသောက်နေထိုင်ဖို့ လိုပါသည်။ ကိုယ်ခန္ဓာက လိုအပ်သော စွမ်းရည်ပမာဏကို ထုတ်လုပ်ပေးနေရပါသည်။ ထိုစွမ်းရည်သည် ကျွန်ုပ်တို့စား သောက်သော အစာပမာဏကနေ ရရှိပါသည်။ အကယ်၍ ကိုယ်စားသောက်ထားတာထက် အလုပ်ပိုလုပ်မိခြင်း ၊ တောင်တက်တာ များသွားခြင်းတို့ ကြုံရလျှင် စွမ်းရည်လျော့ကျကာ ခံနိုင်ရည်ကျဆင်းပြီး ကိုယ်တွင်းအပူချိန် ကျသွားကာ ဒုက္ခတွေ့ရပါသည်။ No...
ကာတွန်း KZZH – လိုင်စင်မဲ့လူနာ (မိုးမခ) ဇွန် ၂၈၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း - KZZH Related posts ကာတွန်း KZZH- အသံက မတိတ်နိုင်သေး (0) ကာတွန်း kzzh ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းသူတွေ … (0) ကာတွန်း kzzh ရဲ့ ပြောထားပြီးသားနော် … (0) ကာတွန်း kzzh ရဲ့ မေကြီးကယ်ပါ (0) ကာတွန်း kzzh ရဲ့ ပျောက်သောသူ (0)
ငါတို့စာပေစာအုပ်တိုက် ၁၅ နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ် အထူးဈေးရောင်းပွဲ Yangon Book Plaza မှာ ကျင်းပမယ် K (မိုးမခ) ဇွန် ၂၈၊ ၂၀၁၈ ငါတို့စာပေ NDSP စာအုပ်တိုက် ၁၅ နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့လမ်းမတော်မြို့နယ် သံဈေး ငါးလွှာရှိ Yangon Book Plaza မှာ ဇွန်လ ၃၀ရက်ကနေ ဇူလိုင် ၂ ရက်ထိ ပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ အဆိုပါစာအုပ်တိုက် ၁၅နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားမှာ ငါတို့စာပေတိုက်ထုတ် စာအုပ်အဟောင်းအသစ်များကို ၃၀% လျှော့ ရောင်းချခြင်းနဲ့ အမှတ်တရ အစီအစဉ်များစွာ ထည့်သွင်းထားပြီး ငါတို့စာပေ ၁၅ နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ငါတို့စာပေ တိုက်ထုတ်စာအုပ်အများဆုံး ရှိသူများအတွက် အထူးအစီအစဉ်တစ်ရပ်ကို ကျင်းပခဲ့ပြီး ဆုရရှိသူများကိုလည်း အဆိုပါပွဲမှာ ဆုလက်ဆောင်များ...
စိုးခိုင်ညိန်း ● အထီးကျန်သူတယောက်၏ နေ့များ (မိုးမခ) ဇွန် ၂၇၊ ၂၀၁၈ (၁) မကြာခင် နွေရာသီ ရောက်လာတော့မှာဆိုတော့ ပန်းတွေ အညှိုးမြန်တော့မှာပဲလို့တွေးမိပြီး မြို့ကလေးဆီက ထွက်ပြေး လာတဲ့ နှင်းမှုံလေးတွေကို နေရာထိုင်ခင်း ပြင်မပေးမိဘူး။ နှင်းမှုံလေးတွေဟာ ဧည့်ခန်းထဲက မီးလင်းဖိုက မီးရောင်ကို မြင် တာနဲ့ ခြံထဲက ပန်းခင်းတွေရှိရာဆီ ပြေးထွက်သွားကြတယ်။ လေရဲ့ တရွှီရွှီအော်သံနဲ့အတူ နှင်းမှုံလေးတွေဟာ နေ ရောင်ခြည်ကို ပုန်းကွယ်ဖို့ ပွင့်ဖတ်တွေရဲ့ အလွှာအထပ်တွေကြား အတင်းလုယက်တိုးဝင်နေကြတယ်။ ဒါကို ပွင့်ဖတ်တွေက တဖြေးဖြေးပွင့်အာလာပြီး နှင်းမှုံလေးတွေ ပုန်းကွယ်နေတဲ့အကြောင်း နေရောင်ခြည်ကို ဖွင့်ပြောလိုက်လေတော့ နှင်းမှုံလေး တွေဟာ မျက်ရည်အဖြစ်နဲ့ ပွင့်ဖတ်တွေပေါ်ကနေ လျှောဆင်းသွားလေတော့တယ်။ အို ဒီမှာတော့ ပန်းတခင်းလုံး စိုရွှဲလို့...
မျိုးတေဇာမောင် ● Milk (မိုးမခ) ဇွန် ၂၇၊ ၂၀၁၈ ဗမာလိုနွားနို့လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပေမယ့် Milk ဟာ လူစစ်စစ်တယောက်ဖြစ်တယ် တိတိကျကျပြောရရင် Milk ဟာ အမေရိကန်ယောက်ျားတယောက် ဒီထက်ပိုပြီးတိတိကျကျပြောရရင် Milk ဟာ အမေရိကန်ဂေးတယောက် ဘုရားသခင်ရဲ့ ဖန်ဆင်းမှုမှာ လူသားအားလုံးအတူတူ အဲ့ဒီလို Milk က ယုံကြည်တယ် Milk ဟာ ဂေးတယောက်၊ ဂေးဘ၀ကို Milk ယုံကြည်တယ်၊ စွဲမက်တယ် Milk ဟာ နွားနို့လို မဖြူစင်ဘူး ဒါပေမယ့် လူနည်းစု အတွက် မျှော်လင့်ချက် အာဟာရဖြစ်တယ် “ကျွန်တော် နာမည် ဟာဗီးလ် မစ်ခ် ကျွန်တော် ဒီမှာ ခင်ဗျားတို့အားလုံးကိုစုစည်းပြီး ဂေးအခွင့်အရေးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ရောက်လာတာ” ကက်စထရိုလမ်း ထင်းရူးသားဆပ်ပြာ သေတ္တာပေါ်မှာ...
လောအယ်စိုး ● ဆရာမ ဒေါ်ခင်ထားရွှေ – အပိုင်း (၁)
လောအယ်စိုး ● ဆရာမ ဒေါ်ခင်ထားရွှေ – အပိုင်း (၁) (မိုးမခ) ဇွန် ၂၇၊ ၂၀၁၈ ဘဝတွင် ဘယ်သောအခါမှ မေ့၍မရသော မိတ်ဆွေ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖတ်များ တနည်းအားဖြင့် အတိုင်းအတာ အတော်များများ ခံယူချက် ရင်ခုန်သံ တူညီသူများတို့ ဖြတ်သန်းမိခဲ့ကြသော ဘဝ၏ နေ့ရက်များအတွင်း ကျွန်တော်တို့ ကြုံခဲ့ကြပါသည်။ ရွှင်လန်းအားရလို ဘဝမှာ အဆင်ပြေမှုများနှင့် ကြုံတွေနေစဉ် သူတုိ့တစ်တွေကို သတိရကြသလို သောင်ကမ်းမမြင်လို မုန်တိုင်းတွေထန်နေသော ကာလတွေမှာလည်း သူတို့တစ်တွေအား အမည်မဖော်နိုင်သော တမ်းတမှုများနှင့် ကျွန်တော် သတိရတတ်ပါသည်။ ကျေးရွာမှာ အတူကြီးပြင်းခဲ့သော သူငယ်ချင်းများ မူလတန်းကျောင်းသားဘဝမှာ ကျွန်တော်၏ ဆရာမတစ်ဦး၊ အထက်တန်း ကျောင်းသားဘဝမှာ ကျွန်တော်၏ အတန်းပိုင် ဆရာမတစ်ဦးဖြစ်ကြသော ဆရာမ ဒေါ်ခင်ထားရွှေကို...
ကာတွန်း သာလှ (နတ္တလင်း) ရဲ့ သိပြီးပါပြီကွာ …
ကာတွန်း သာလှ (နတ္တလင်း) ရဲ့ သိပြီးပါပြီကွာ … (မိုးမခ) ဇွန် ၂၇၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း သာလှ (နတ္တလင်း) Related posts ကာတွန်း သာလှ(နတ္တလင်း) – မွေးနေ့ဆိုလို့ (0) ကာတွန်း သာလှ (နတ္တလင်း) ရဲ့ ဖော်ပေးကြပါဦး … (0) ကာတွန်း သာလှ (နတ္တလင်း) ရဲ့ စားပြီးသူတွေ ထွက်ကြပါ … (0)
ထက်ခေါင်လင်း (Myanmar Now) ● မြောက်ကိုရီးယားအကြောင်း ကောင်းတာတွေရေးတဲ့ မြန်မာသတင်းစာ (မိုးမခ) ဇွန် ၂၇၊ ၂၀၁၈ မြောက်ကိုရီးယားတွင် လူထုကို ဖိနှိပ်ခြင်း မရှိကြောင်း ယမန်နှစ်က အထီးကျန်ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခဲ့သော မြန်မာစာစောင် ထုတ်ဝေသူတစ်ဦးက ဆိုသည်။ (ရန်ကုန်) — မြောက်ကိုရီးယားဟု ဆိုလိုက်လျှင် တိုင်းသူပြည်သားများအပေါ် ရက်စက်သည့် ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံ၊ လူ့အခွင့် အရေးချိုးဖောက်မှုများ ရှိသည့်နိုင်ငံ၊ ရန်လိုသည့်စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကြောင့် အထီးကျန်ဆန်သည့် နိုင်ငံအဖြစ် သတင်းဌာန အများစုက ပုံဖော်ကြသော်လည်း ရန်ကုန်အခြေစိုက် ‘ခေတ်သစ်သတင်းစာ’ ကမူ ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ ကောင်းသတင်းများသာ ရေးသားသည်။ နှစ်စဉ် အကြိမ် ၂ဝ ခန့် ထုတ်ဝေသည့် ခေတ်သစ်သတင်းစာ (ဓာတ်ပုံ – Myanmar Now) သက်တမ်းငါးနှစ်ရှိပြီဖြစ်သည့်...
​ကမ်လူဝေး ● ဆေးရုံ (၂၂) (မိုးမခ) ဇွန် ၂၇၊ ၂၀၁၈ ထွက်​ကျလာတဲ့ က​လေးက ကီလိုတဝက်​ပဲရှိတယ်​ အသက်​က​တော့ရှူလို့ ကိုယ်​ဝန်​အနုအရင့်​ကို တွက်​ချက်​ သား​လျောလား လမ​စေ့​မွေးလား စာရွက်​​ပေါ်က စာရင်းဇယား​တွေ ကီလိုတဝက်​က​လေးက အချိန်​တန်​​တော့ ​သေမှာပဲ ​သေဖို့အချိန်​​ပေး အမှိုက်​ပုံ​ဘေးမှာ ချထားရမလား အသက်​ရှူနေ​သေးသ​ရွေ့ လူသားတ​ယောက်​ရသင့်​တဲ့ ​စောင့်​​ရှောက်​မှု ​ဆေးရုံကြီး​ပေါ်မှာရဖို့ ဘယ်​သူ​တွေဆီက ​တောင်းဆိုရပါ့မလဲ ကီလိုတဝက်​ က​လေးဟာ ဘယ်​​လောက်​​သေး​သေး လူသားတ​ယောက်​ဖြစ်​ပါ​သေးတယ်​ အသက်​ရှူ​နေ​သေးသ​ရွေ့ အသက်​ရှိတဲ့လူသားတ​ယောက်​ ဖြစ်​ပါ​သေးတယ်​ ကိုယ်​ချင်းစာတရားနဲ့ရန်​ဖြစ်​ထားတဲ့လူကြီး​တွေဟာ လူသားဖြစ်​ခြင်းကိစ္စကို ​မေ့​နေကြတယ်​ ဝမ်းနည်းစိတ်​မ​ကောင်းစရာကမ္ဘာ။ ။ ကမ်​လူ​ဝေး Tags: ကမ်လူဝေး Related posts ကမ်လူဝေး- ငါတို့ဘဝဇာတ်ကြောင်း (0) ကမ်လူဝေး ● နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ဝမ်းနည်းမှတ်တမ်း...
မိုနီလီဇာ စိုးရိမ် (မိုးမခ) ဇွန် ၂၇၊ ၂၀၁၈ ‘မိုနီလီဇာ’ ဟာ အရင်လိုမပြုံးတော့ဘူး ‘ပန်းဆိုးတန်း’ တံတားနားမှာ သူ့ပါးပေါ်က ကျပျောက်သွားတဲ့ သနပ်ခါးအတွက် ဒေါသထွက်နေတယ်… ‘မိုနီလီဇာ’ ဟာ အရင်လို မပြုံးတော့ဘူး သူမ စဉ်းစားတယ်၊ သူမတွေးတယ် ပွဲသွင်းတဲ့ ပြခန်းပိုင်ရှင်ကို ပြဿနာရှာရမှာလား ‘လှိုင်သာယာ’ ပြန်ပြီး အလုပ်သမားသပိတ်ထဲ ပြန်ဝင်နေလိုက်ရမှာလား… ‘မိုနီလီဇာ’ ဟာ အရင်လို မပြုံးတော့ဘူး အညာမှာရေကြီး ‘ယာ’ ပျက်လို့မြို့ပေါ်လွင့်လာတာ ဓနရှင်ကိုမကြိုက်ပေမယ့် အိမ်ပြန်ပို့စရာမရှိတော့လို့ သပိတ်စခန်းက ထွက်လာတာ နောက်ထပ် ဘာတွေပေးဆပ်ရဦးမှာလဲ မရဲတရဲတွေးတယ် …. မြန်မာပြည်က ‘မိုနီလီဇာ’ လေ… အညာကလာတယ် အခုတော့ ‘ကျောက်တံတား’ စခန်းမှာ ….။ ။ No...
မရွှေ့ဆိုင်းတဲ့ ပြပွဲနဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ သတင်းများ၊ ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရတဲ့ ကျောင်းသားနဲ့ နိုင်ငံရေးပွဲ K (မိုးမခ) ဇွန် ၂၇၊ ၂၀၁၈ ပန်းချီကျော်မင်းထိုက် “Moment of Peace” အမည်ရတဲ့ တကိုယ်တော် ပြပွဲ ဇွန် ၂၇ရက် စပြမယ် Moment of Peace အမည်ရတဲ့ ပန်းချီကျော်မင်းထိုက်(green opera)ရဲ့ လေးကြိမ်မြောက် တကိုယ်တော် ပန်းချီပြပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ ဒဂုံမြို့နယ်ယောမင်းကြီးလမ်းရှိ Gallery 65မှာ ဇွန်လ ၂၇ရက်ကနေ ဇူလိုင် ၁ ရက်နေ့ထိ ငါးရက်ကြာပြသ သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဆိုပါပြပွဲမှာ ပန်းချီဆရာ ကျော်မင်းထိုက်ရဲ့လက်တလောရေးဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီကားပေါင်း ၃၀ကျော်ကို ပြသသွားမှာ ဖြစ်ပြီး ပြပွဲရက်အတွင်း မနက် ၁၀နာရီကနေ...
သခင်ဘဟိန်း ၁၀၁နှစ်ပြည့်နဲ့ ဗမာ့နောင်ရေး K ငြိမ်းချမ်း (မိုးမခ) ဇွန် ၂၇၊ ၂၀၁၈ လာမယ့် ဇွန်လ ၂၇ ရက်ဆိုရင် ကွယ်လွန်သူငြိမ်းချမ်းရေး စာဆိုကြီး ဒဂုန်တာရာက ကဗျာ(သို့) ဘဟိန်းလို့ ညွှန်းဆို ရေးသားခဲ့တဲ့ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကဌ သခင်ဘဟိန်း (၁၀၁)နှစ် ပြည့်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သခင်ဘဟိန်းလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှု အခန်းကဏ္ဍမှာ ကျောင်းသားဘဝနဲ့ရော၊ နိုင်ငံရေးသမား ဘဝနဲ့ရော ကွယ်လွန်ချိန်ထိ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကို မစားဘဲစွန့်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံသားကောင်းဆိုတာ သိကြပါတယ်။ သခင်ဘဟိန်းကို ၁၉၁၇၊ ဇွန်လ၂၇ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက်၇နာရီတွင် အင်းဝမြို့ကိုင်းတန်းရပ်မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး အဖ ဦးမှင်၊ အမိဒေါ်ဦးတို့၏ ၅ ယောက် မြောက်သားဖြစ်ပါတယ်။ သခင်ဘဟိန်းကို အင်းဝမြို့မူလတန်းကျောင်း၊ မန္တလေးမြို့အေဘီအမ်မိန်းကလေးကျောင်း၊ သကျသီဟ...
အောင်ငြိမ်းချမ်း (Myanmar Now) ● နတ်သစ်ရွက် မွေးဖွားရာဒေသ (ဓာတ်ပုံအက်ဆေး) (မိုးမခ) ဇွန် ၂၆၊ ၂၀၁၈ လက်ဖက်ခြောက်၊ လက်ဖက်စိုတို့ကို ဒေသအသီးသီးရှိ မိသားစု လက်ဖက်ရည်ကြမ်းဝိုင်း၊ အလှူမင်္ဂလာပွဲ၊ စားသောက်ဆိုင်ကြီးငယ်တို့တွင် မဖြစ်မနေ အသုံးပြုကြသည်။ အရသာမှာ နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်သောကြောင့် နတ်သစ်ရွက်ဟု တင်စားကြသကဲ့သို့ “အရွက်မှာ လက်ဖက်” ဟုလည်း ဆိုကြသည်။ မကြာသေးခင်က ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ပင်လောင်းမြို့သို့ ရောက်ရှိစဉ် လက်ဖက်ခင်းမှ ပွဲရုံအထိ လက်ဖက်ခြောက် ထုတ်လုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို သတင်းထောက် အောင်ငြိမ်းချမ်းက ဤသို့ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ လက်ဖက်ခူးနေသည့် လဲလှောင်းရွာ ဒေသခံများ။ မိုးတွင်းရောက်ပြီဖြစ်သောကြောင့် ထွက်ရှိလာသည့် လက်ဖက်များကို ကိုယ်တိုင် ခြောက်သွေ့ခြင်း မပြုကြဘဲ အများအားဖြင့် စက်ရုံသို့ရောင်းချကြသည် (ဓာတ်ပုံများ – အောင်ငြိမ်းချမ်း/Myanmar...
ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်း – ဒီတိုင်းပြည်၊ ဒီပြည်သူနဲ့ ဒီ ဒီမိုကရေစီ (မိုးမခ) ဇွန် ၂၇၊ ၂၀၁၈ အခုတလောဗမာပြည်ရဲ့အကြောင်းပြောလေတိုင်း ဒီမိုကရေစီအစိုးရ၊ ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီအပြောင်းအလဲစတဲ့ စကားတွေထိပ်တန်းကပါနေပါတယ်။ ဒီနေ့ အခါဒီနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေကို တကယ်ခံစားနေရပြီလား၊ ဘယ်လောက် ခံစားနေကြရသလဲ စတဲ့အကြောင်းတွေလည်း သဘာဝကျစွာပြောဆိုငြင်းခုံနေကြပါတယ်။ ပြည်ပမှာလည်းပြောကြ၊ ပြည်တွင်းမှာလည်းပြောကြနဲ့ ပြဿနာကြီးတခုလိုကို ဖြစ်နေတာ ပါ။ ဘာကိစ္စ၊ ဘာပြဿနာပဲပြောပြော ဒီအကြောင်းအရာကိုပဲ ထိပ်တန်းတင်တင်လာကြ တာတွေ့ရပါတယ်။ လူသတ်မှုတွေပြောမလား၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမလား၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအကြောင်းပြောမလား၊ ကဗျာရွတ်ပွဲကိစ္စပြောမလား၊ ဘာကိစ္စ၊ ဘာအကြောင်း ပြောပြော နောက်ဆုံးတော့ဒီဘူတာပဲဆိုက်ရတယ် ဆိုတာလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ရွေးကောက် ပွဲမှာမဲရဖို့ အတွက်လည်း ဒီအကြောင်းပဲပြော၊ ကိုယ့်အာဏာကိုထိန်းသိမ်းကာကွယ်ဖို့လည်း ဒီဟာနဲ့အကာအကွယ်ယူ၊ ဒီအကြောင်းဟာ တကယ့်ကိုပွဲတိုင်းကျော်လိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်စဉ်းစားမိတာလေးတွေ...
လင်းငယ် ● ကျယ်ကျယ်ဖော် (မိုးမခ) ဇွန် ၂၆၊ ၂၀၁၈ (၁) အခု အခန်းထဲမှာ တယောက်တည်း။ အခန်းဆိုတာကလည်း အိမ်နဲ့အဝေးကြီးမှာ ရှိတဲ့နေရာ။ အိမ်နဲ့ဝေးတဲ့အပြင် ဘာသာစကားတူလူတွေနဲ့ ဝေးတဲ့နေရာ။ ဘာ သာစကားမတူတဲ့ လူတွေဆိုပေမယ့် သူနဲ့ ကိုယ်နဲ့ အဆက်အသွယ်လုပ်လို့ရတဲ့ ဘာသာစကားတော့လည်း တတ်ပါရဲ့။ ကိုယ့်အမေဆီက တတ်တဲ့စကားမဟုတ်တော့ ရင်ဘတ်ထဲက စကားလုံးတွေ၊ ဒဏ်ရာတွေ၊ အမှတ်တရတွေကို ခံစားဖွဲ့သီဖို့ အတွက် အားမရ။ အားရပြန်ရင်လည်း နားလည်သူက ကိုယ်နှယ်တူ ဖြစ်ဖို့မလွယ်။ နားမလည်ရင်တောင် နားထောင်ပေးဖို့ လူရှိမယ်မထင်။ အားလုံးက ရုန်းကန်လှုပ်ရှား၊ ကြိုးစားနေကြရတဲ့ အဝိုင်းအဝန်း။ ငွေပေးပြီး နာထောင်မယ့်လူရှာရင်တောင် ရင်ဘတ်အစစ်တော့ ပါလာမယ်မထင်။ ကိုယ့်အနားမှာ နေနေကြတဲ့ မြန်မာပြည်က လူအုပ်စုတော့ ရှိသား။...
ကာတွန်း လိုင်းလုဏ်ရဲ့သူရဲကောင်း (မိုးမခ) ဇွန် ၂၆၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
အောင်ငြိမ်းချမ်း (Myanmar Now) ● လက်ဖက်ခြောက် ပိုကောင်းရန် နည်းလမ်းဟောင်းကို ပြုပြင်ရမည် (မိုးမခ) ဇွန် ၂၆၊ ၂၀၁၈ (ပင်လောင်း) — တောင်ကုန်း တောင်တန်းများ ဝန်းရံထားသည့် ပင်လောင်းမြို့ထဲရောက်သည်နှင့် သင်းပျံ့ပျံ့ လက်ဖက် ခြောက်နံ့က ကြိုဆိုနေသည်။ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၏ လက်ဖက်စိုက်ဧက အများဆုံးမြို့ဖြစ်သည်နှင့်အညီ မြို့ထဲတွင် လက်ဖက်ခြောက်၊ လက်ဖက်အစိုဆိုင် အများအပြားတွေ့ရသည်။ လက်ဖက်လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ နှစ် ၅ဝ နီးပါးရှိသည့် ဒေသခံ ဦးစိုင်းပွန်းက လက်ဖက်ခြောက် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် မကြာသေးခင်နှစ်များအတွင်း လုပ်နည်းလုပ်ဟန် ပြောင်းလဲမှုတချို့ရှိလာရာ ထိုသို့ပြောင်းလဲလိုက်သည့် နောက်ပိုင်းတွင် ဝင်ငွေ ပိုတိုးလာကြောင်း ပြောသည်။ “အရင်ကဆို တစ်မိသားစုလုံး ဝိုင်းလုပ်ရတာ၊ အခုတော့ ပိုပြီး အချိန်ကုန် သက်သာလာတယ်၊ လက်ဖက်...
ကာတွန်း ကိုတေရဲ့ ဆေးပြီးနေတဲ့ နိုင်ငံ (မိုးမခ) ဇွန် ၂၆၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ကိုတေ Related posts ကာတွန်း ကိုတေရဲ့အတွေး (0) ကာတွန်း ကိုတေရဲ့ နေရာယူတတ်သူ (0) ကာတွန်း ကိုတေရဲ့ အမြင့်ရောက်လေ .. လေပိုတိုက်လေ … (0) ကာတွန်း ကိုတေရဲ့ ထမ်းနိုင်တုန်းလေး ထမ်းခွင့်ရတာ (0) ကာတွန်း ကိုတေရဲ့ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ (0)
မောင်တူး ● ဒို့ဗမာတွေ သိက္ခာမနွမ်းရအောင် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တင်မောင်ဦးက ဦးဆောင်စခဲ့ပြီ (မိုးမခ) ဇွန် ၂၆၊ ၂၀၁၈ ဒီနေ့ဟာ သူရဲကောင်း၊ အာဇာနည်၊ အရှိုချင်းလူမျိုး ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးကို မဆလအစိုးရက ကြိုးပေးကွပ်မျက်ခဲ့တဲ့ ၄၂ နှစ်ပြည့်နေ့ပါ။ ဂျူးလိယက် ဖူးချစ်ရဲ့ ကြိုးစင်ပေါ်က မှတ်တမ်းများ တို့ ရဲဘော်ရဲ့ ကြိုးတိုက်ထဲက ပုံရိပ်များ ကြိုးစင်သွားရာ၊ ခြေရာပြတ်ထင် ကြိုးစင်အတက်၊ သွေးမပျက်တာ ကြိုးစင်ထက်မှာ ရဲလက်နီစွေး ခွပ်ဒေါင်းသွေးနဲ့ အရေးတော်ပုံဖွဲ့ခဲ့သည်။ ။ (ဆလိုင်း တင်မောင်ဦး ကျဆုံးခြင်း ၃၄ နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ်) မောင်လွမ်းဏီ၂၄ – ၆ – ၂၀၁၀ ဆလိုင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က အရှိုချင်းဘာသာအရ ရဲစွမ်းသတ္တိရှိသောယောက်ျား ဖြစ်ပါတယ်။...
ဇင်လင်း ● ပြည်သူ့ရေစီးထဲတွင် ပျော်ဝင်နိုင်စွမ်းရှိသူများ (မိုးမခ) ဇွန် ၂၆၊ ၂ဝ၁၈ မမေ့ကောင်းစရာ မမေ့နိုင်စရာ အတိတ်ကာလ ရက်စွဲများအနက် ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဇွန် (၁၉) ရက်နေ့သည် မိမိအဖို့ ထူးထူးခြား ခြား သတိရစရာ ဖြစ်သည်။ ထိုနေ့က မိမိတို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရုံး၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်၏ (၄၄) နှစ်မြောက် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အခန်းအနား ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအခမ်းအနားတွင် အမျိုးသားဒီမိုက ရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့မှ ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူ ဆရာဦးမောင်ကို (၁၉၉ဝ နိုဝင်ဘာ ၉ ရေကြည်အိုင် စစ်ကြောရေးစခန်း၌ ကွယ်လွန်ခဲ့သူ) နှင့် ကဗျာဆရာကြီး ‘ဆရာဂျမ်း’ ခေါ် ဆရာတင်မိုး (၂ဝဝ၇ ခုနှစ်၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၂)...
ကျော်ဟုန်း – ရေ = ရေ (မိုးမခ) ဇွန် ၂၅၊ ၂၀၁၈ ဘဝတခုဟာ ရေပဲ ကြမ္မာက ရေလှောင်ကန်ကြီးပေါ့။ သွန်လိုသွန် လှောင်လိုလှောင် ကြမ္မာညွှန်ရာလမ်းမှာ အားပျော့မနေနဲ့ လူကလေးရေ မင်းဟာ ရေကွဲ့ရေဆိုတာ လိုရာစီးတတ်ရတယ်။ ကြမ္မာဆိုး လှောင်ကန်ထဲရောက်နေချိန်လည်း နေအကူနဲ့ အငွေ့ပျံ ရုန်းထွက်နိုင်တယ် မိုးအကူနဲ့ ဖြိုးမောက်လျှံ ကန်ထွက်နိုင်တယ် အချည်ရှိရင် အဖြည်ရှိမှာပဲ။ အယူအဆ ဖြစ်တည်မှု ဝါဒ အားလုံးဟာ တိမ်တိုက်။ တရားသေမရှိတဲ့ သြကာသထဲမှာ ဝဲသြဂ လည်နေမယ့် ဖြစ်ပျက်များ ဘာမှမစွဲရင် ဘာမှမမွဲဘူး။ ဖက်တီးအက်စစ်နဲ့ချွတ်ပေမယ့် မူလအဖြူပြန်မရတဲ့ အဝတ်အထည်ကို တမ်းတ မစွဲဘဲ အရောင်မွဲလည်း ဝတ်ရဲရမယ် သန့်စင်ဖို့ဘဲ အဓိက...
ကိုသန်းလွင် ● မလေးရှားမှ သာကူးများ (မိုးမခ) ဇွန် ၂၅၊ ၂၀၁၈ (၁) သူတို့ကိုခြံခုန်ကူးသူများဟုခေါ်နိုင်ပါသည်။ ဖားပြုတ်နှင့်လည်းတူသည်ဟုဆိုကြသည်။ မြန်မာလိုတော့ “သာကူး” ဟုခေါ် သည်။ သာသောဘက်သို့ကူးပြောင်းကြသူများကို ခေါ်သည်။ မလေးရှားရွေးကောက်ပွဲတွင် အတိုက်ခံတို့က နိုင်သည်ဟု သိရသည်နှင့် တပြိုင်နက်ရှုံးနေသောပါတီဘက်မှ နိုင်ငံရေးသမားများသည် နိုင်သည့်ပါတီ ဘက်သို့ကူးပြောင်းရန် ကြိုးစားကြ တော့သည်။ မလေးရှား နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော် အုပ်ချုပ်လာသော BN-Barisan Nasional ပါတီသည်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အတိုက်အခံတို့၏ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ (PH Parakan Harapan) ကို အရှုံးကြီးရှုံးခဲ့သည်။ သို့ပါသော်လည်း အနိုင်ရပါတီဘက်သို့ ပြောင်းရွှေ့မှုများကြောင့် မလေးရှားနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီသည် စိုးရိမ်စရာအခြေအနေ သို့ ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်သည်။ မေလ ၁၀ ရက်နေ့ မဲများရေပြီးချိန်တွင် PH...
ကာတွန်းကိုတေရဲ့ အခွင့်အရေးလေးပဲ ပေးပါ …. (မိုးမခ) ဇွန် ၂၅၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်းကိုတေ Related posts ကာတွန်းကိုတေရဲ့ ဖြည်းဖြည်းတွန်းကြပါ … လှမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျ (0) ကာတွန်းကိုတေရဲ့ သက်သာတယ်များ ထင်နေလား … (0)
ကျော်​ထင်​ ● ကြိုးစားမှု ဘိန်း​ကျွေးခြင်း (မိုးမခ) ဇွန် ၂၄၊ ၂၀၁၈ (၁) လူတယောက်​မှာ ရည်​ရွယ်​ချက်​ ရှိဖို့ လိုသလား မလိုဘူးလားဆိုတာ​ပြောဖို့ ကိုယ့့်​ဘဝကိုပဲ ပြန်​​လှည့်​ကြည့်​ရမယ်​ထင်​ပါတယ်​။ ကိုယ်​လုပ်​နေတဲ့ ပုဂ္ဂလိကဆရာဆိုတာ ကိုယ်​ရည်​ရွယ်​ခဲ့တဲ့ သက်​​မွေးဝမ်း​ကျောင်း အလုပ်​ ဟုတ်​လို့လား။ ဟုတ်​တယ်​ဆိုရင်​ ဒီလိုအသက်​​မွေးဖို့ ဘယ်​လို ကြိုးစားလုပ်​ခဲ့ရသလဲ။ မဟုတ်​ဘူးဆိုရင်​ တခြား ဘာ​တွေကို ရည်​ရွယ်​ခဲ့တာလဲ။ ဖြစ်​ချင်​တာဟာ ရည်​ရွယ်​ချက်​လား။ရည်​ရွယ်​ချက်​ဆိုတာ ဖြစ်​ချင်​တာလား။ ဖြစ်​ချင်​တာနဲ့ပဲ ရည်​ရွယ်​ချက်​ဖြစ်​သွားသလား။ (၂) ဒါဆိုရင်​​တော့ ဖြစ်​ချင်​တာ​တွေက အများသား။ အမိ​မြေမှသား​ကောင်းများကြည့်​ပြီး​ စစ်​သားဖြစ်​ချင်​ခဲ့တယ်​။​ ကျော်​​အောင်​​မော်​၊ စိုင်းလားရှိုး၊​ မောင်​ငြိမ်းချမ်းတို့ရဲ့ ရုပ်​ပြ​တွေဖတ်​ပြီး ရုပ်​ပြပန်းချီဆရာဖြစ်​ချင်​လွန်း​လို့မန္တ​လေးပန်​တျာ​ကျောင်းမှာ အစား ဆင်းရဲခံခဲ့တယ်​။ ကဗျာဆရာဖြစ်​ချင်​လွန်းလို့ အ​မေ့အဆူ​ခံပြီး ကဗျာ​တွေ​ရေးခဲ့တယ်​။​ မောင်​စိန်​ဝင်း(ပုတီးကုန်း)၊ ခက်​မာ၊ နွမ်​ဂျာသိုင်းတို့ကို...
ကာတွန်း ATH ရဲ့ စိုက်ကြပြန်ပြီ … (မိုးမခ) ဇွန် ၂၄၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
Page5of 908«1...34567...908»
အမ္ဗနဒီကျော်စွာ ● စာဖတ်ခိုင်းကြရုံပဲလား https://t.co/ULDAbMv1wV https://t.co/Em3igEsdnj about 42 minutes ago ReplyRetweetFavorite